Kildare भूलभुलैया - IntoKildare
एक सस्तो मूल्य मा राम्रो पुरानो रमाईलो संग एक चुनौतीपूर्ण र रोमाञ्चक पारिवारिक दिन को आनन्द लिनुहोस्। बाहिर ताजा हावा मा, Leinster को सबैभन्दा ठूलो हेज भूलभुलैया परिवारहरु को लागी एक दिन संगै रमाईलो को लागी एक शानदार ठाउँ हो।
हेज भूलभुलैया मा तपाइँको चुनौती भूलभुलैया को केन्द्र मा हेर्ने टावर को बाटो संग लाइन हेज को १.५ एकड़ को माध्यम बाट तपाइँको बाटो खोज्न को लागी हो। तपाइँ हराउन बाध्य हुनुहुन्छ, त्यहाँ २ किलोमिटर भन्दा बढी पथहरु छन् र तपाइँको बाटो खोज्न रमाईलो को भार छ ग्यारेन्टी छन्। हेर्ने टावर बाट वरपरका ग्रामीण इलाकाहरु र काउन्टीहरु को लागी मनोरम दृश्यहरु को आनन्द लिनुहोस् वा केवल भूलभुलैया मा यसको लेआउट खुलाउने दृश्य को आनन्द लिनुहोस्। सेन्ट ब्रिगिड, Kildare को संरक्षक संत डिजाइन को लागी प्रेरणा थियो, जसमा सेन्ट ब्रिगिड क्रस चार चतुर्भुज भित्र स्थित छ, क्रस को केन्द्र भूलभुलैया को केन्द्र भएको छ।
काठको भूलभुलैया एक रोमाञ्चक समय चुनौती हो र मार्ग बारम्बार तपाइँ तपाइँको औंलाहरु मा राख्न को लागी परिवर्तन भएको छ!
यो पनि एक साहसिक ट्रेल, जिप वायर, पागल गोल्फ र युवा आगन्तुकहरु को लागी एक बच्चा को खेल क्षेत्र हो। नाश्ता र नाश्ता साइट मा पसल मा उपलब्ध छन्।
अनलाइन बुकिंग आवश्यक छ
साहसिक र गतिविधिहरू, आउटडोर, परिवार रमाईलो, लुकेका रत्नहरू, क्लेन
काउन्टी किल्डारे, आयरल्याण्ड.
मई र सेप्टेम्बर मा खुला सप्ताहांत
7 दिन जुन, जुलाई र अगस्ट
10 am-1pm सत्र वा 2pm 6pm सत्र
विषय परिवर्तन गर्न को लागी, कृपया www.kildaremaze.com मा जानुहोस् थप जानकारी को लागी